बुधबार, चैत १९, २०७६
# चैतदशैँ प्रभावित
# मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण
#तीनै जनाको नमूना परीक्षण
अनुहारमा दाग आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् प्राकृतिक उपाय कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ, यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ।
नेपाली पब्लिक २०७६, १४ फागुन बुधबार ०१:०५
काठमाडौं – सुन्दर तथा आकर्षक देखिने हरेक नारीको चाहना हुन्छ। कतिपय मान्छे राम्राे बन्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि अनुहारमा दाग आएर हैरान बनाएको हुन्छ। त्यसैले आज हामी यहाँ केही टिप्स् बताउदै छौं। जुन तपाइलाई काम लाग्न सक्छ।
कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ, यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ। त्यस्तै दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ। काँचो दूधमा कपास डुबाई अनुहारमा बिस्तारै दल्ने र केही समय त्यसै छोडेर सुकेपछि मनतातो पानीले धुने गरेमा अनुहारमा चमक दिन्छ।
त्यस्तै दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुहोस् र घ्यूकुमारीमा छालासम्बन्धी अनेक समस्या समाधान गर्ने गुण हुन्छ। यसका लागि अनुहारमा घ्यूकुमारी दलेर सुक्न दिई धुने गर्नुपर्छ। यसले छालालाई म्वइस्चराइज गर्न पनि मद्दत पुया्उँछ।
बदामलाई रातभरि भिजाउने र बिहान उठी यसको पेस्ट बनाई यसमा चन्दनको पाउडर मिसाएर बनाएको पेस्ट अनुहारमा दल्ने गर्नाले अनुहारका दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छन्। त्यस्तै आलुलाई स्लाइस पारी काटेर त्यसलाई दाग भएको ठाउँमा दली सुक्न दिने र मनतातो पानीले धुने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ।
आलुको पेस्ट बनाई यसमा मह मिसाएर अनुहारमा दली केही समय त्यसै छोडेर धुने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँछ। बेसारमा काँचो दूध र कागतीको रस मिसाई दाग भएको ठाउँमा लगाएर केही मिनेट त्यसै छोडी मनतातो पानीले पखाल्नुपर्छ। त्यसैगरी पाकेको मेवाको भित्री भागलाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँदै जानुका साथै अनुहार चम्किलो बन्दै जान्छ।
ओखरलाई कुटेर त्यसमा दही र केही थोपा बदामको तेल हाल्नुहोस् र यसलाई अनुहारमा लगाउनाले छालामा चमक ल्याउँछ। तपाईको छाला एकदमै तैलीय छ भने अन्डा र गहुँको पिठोको प्याक लगाउनुहोस् यसले छालाको तेललाई नियन्त्रण गर्छ। हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस्, यसले अनुहारलाई नरम बनाउँछ। यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ।
गोलभेँडा, कागती र अन्डाको प्याक लगाउनाले डन्डीफोर, कालो धब्बा हट्नुका साथै छालामा चमक पनि आउँछ। त्यस्तै गोलभेँडा, कागती र महको प्याक लगाउनाले अनुहार चम्किलो हुन्छ। घामले डढेर कालो भएको छालामा काँचो दूधले मसाज गर्दा झनै फाइदा हुन्छ। खैरो चिनी, कागती र नरिवलको तेल मिसाई मसाज गर्नाले सनबर्नको असर कम गर्न सकिन्छ। काँक्रोको पेस्ट, मुल्तानी माटो र रोज वाटरको प्याक बनाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ।
प्रकाशित मिति: २०७६, १४ फागुन बुधबार ०१:०५
२०७६, २९ फागुन विहीबार ०१:४२ यस्ता छन् नरिवल खाँदाका फाइदा
२०७६, २९ फागुन विहीबार ०१:३७ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ
लकडाउनमा जनजिवन कष्टकर हुँदै, सरकारको बाचा ब्यवहारमा देखिएन
कोरोनाले सिकाएको पाठ !
कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावपछि विदेशबाट एक हजार २२० फर्किए